Iingcebiso kunye neendlela zokupheka, indlela yokukhawuleza ngokukhawuleza nokupheka khinkali
Ukupheka kinkali okumnandi? Izikhephe ezimbalwa ezilula eziya kukukholisa abathandekayo bakho.
I-Khinkali yenye enye idumileyo yokutya yaseGeorgia, esele yangena ebomini. Ukuba ngokuqhelekileyo sifuna ukutya ama-dumplings okanye varenki, abantu baseGeorgiya baqhele ukubona ngokufanelekileyo amagama abo asephetsheni khinkali, ngaphakathi apho ingulube kunye nenkomo yenyama kunye nomso omnandi wenyama.
Khetha iindlela zokupheka inhlama ye khinkali?
Kanye kunye nokukhethwa kwenyama, inhlama yinto ebaluleke kakhulu. Yenza iimpazamo ekuphekeni kunye nezikhwama zaseGoorgia ezicocekileyo ziza kuqhekeka zibe yizinto ezingenakwenzeka. Akukho nto inzima kwiimvavanyo ezichanekileyo ze khinkali.
Uhlaza - iikomityi ezintathu;
I-egg - 1 piece;
Amanzi ashushu - 1 iglasi;
ITyuwa - kwintetho yakho.
Fumana isitya esincinci esikhulu ngokwaneleyo kwindundana yomgubo;
Dlulela umgubo ukuze i-slide isungulwe;
Ngezandla zakho, yenza i-groove phakathi kwidanga lomgubo. Phala khona enye iqanda, amanzi abandayo kwaye ungeze ityuwa;
Sifuba kakuhle inhlama, siyifake kwisikhwama okanye kwifilimu yokutya kwaye ushiye "ukuphumla" imizuzu engama-20-30;
Emva kwesi sihlandlo, gudla intlama exoxiweyo esuka kwifilimu, ukwahlula ibe yizicucu uze uwagxube kwiinqebengwane ezijikelezayo.
Oku kuyindlela elula, indlela yokwenza intlama ye khinkali. Kukho indlela elula kakhulu, kodwa echanekileyo.
Izithako zihlala zifana, kodwa esikhundleni seqanda, sebenzisa iipunipoli ezimbalwa zeoli.
Phakamisa isiqingatha somgubo kwindawo yokusebenzela elungiselelwe, ukwenza intaba;
Yenza i-groove phakathi, apho songeza khona iipuni ezimbini zeoli yeengqolowa, ityuwa;
Kancinci wathululela amanzi abandayo waza waxolela inhlama;
Xa ufumana isalathisi esincinci, qhawula ithawula ngesiqingatha seyure;
Emva kwemizuzu engama-30, uxoke inhlama kwakhona, wongeze isahlulo somgubo. Hlanganisa ubuncinane imizuzu elinesibini, uze udibanise ithawula malunga nesiqingatha seyure;
Emva kwemizuzu engama-30, yenza intlama yokugqibela yokuxolela, yongeza yonke umgubo owuhlukileyo, ulwahlule kwaye udwebe iifom zeekhokali. Ukuba wenza ukuvavanya okungakumbi kunokuba uyifunayo - akukho nto eyoyikisayo, unokubeka intsalela efrijini kwaye uyisebenzise iintsuku eziyi-3-4.
Ingqalelo: inhlama ephekwe kakuhle ayifanele ifakwe ezandleni.
Recipe Khinkali ekhaya
I-egg - 1 iqhekeza okanye iipunipoli ezi-2 ze-oli yemifuno (oku kuchanekileyo);
Ityuwa - yakho ingcamango;
Ingulube - 300 amagremu (okanye 200 amagremu);
IMvana - 200 amagremu (okanye 300 grams);
I-anyanisi - iziqwenga ezi-3;
I-Parsley kunye nedill - ukunambitha;
Iityuwa, umnyama omnyama nobomvu obomvu - ukula;
Lungiselela inhlama ngokubhekiselele kwenye yeerephepheni ezingasentla, ukwahlula zibe yiindawo kwaye uqoke iziqwenga zibe yimifuno encinci;
Ukupheka okuphekayo: ngokukhawuleza usike ingulube kunye nenkomo, u-anyanisi. Sidibanisa yonke into ngomhluzi, ukulungiselela okumele kuphazamise kusengaphambili. Ncedisa umhluzi kunye nepepper. Kufuneka udibanise umhluzi wenyama njengokuba uza kuthatha inyama ebisiweyo, ungabi nanye;
Ukuphuza ukugxila ngepilisi kunye netyuwa, faka imifino ecocekileyo;
Gqobhoza izandla ezithinyiweyo kwiisangqa uze ufake i-centre ye-dough ehlanganiswe. Ukuzaliswa akufanele kube ngaphezu kwesisindo ngaphezu kovavanyo ngokwalo;
Gcwalisa iziphelo zenhlama ukuze kube nomsila omncinci. Thatha kwizandla zakho uze uyiphendule nantoni na. Ngale ndlela, sifumana imibimbi;
Amanzi, apho izitya zeGeorgia ziza kutshaywa, zityhala kwaye zithobe ngobumnene i khinkali;
Ukulungela khinkali ihlolwe ngokulula: ukuba isikhwama sihamba, ke umveliso ulungele. Yisuse ngokucophelela emanzini uze uyifake kwisitya;
Uphelile ixesha lepenkiki ngepilisi kunye nemifino kwintle yakho.
Qaphela: isidlo senziwa kuphela xa kushushu. Kwiqanda, ilahlekelwa iipropati zayo, kukho enye yeyona nto impawu ye khinkali - ijusi yenyama, ekhutshwa phantsi kwefuthe lokushisa.
I-Khinkali yindlela engcono kwiindawo zokulahla. Yilungiselelwe ngokukhawuleza, kwaye iigrafti ziyakukholisa iigourmets ezifunayo. Into ephambili ukupheka khinkali ngokubhekiselele kwi-recipe echanekileyo. Bon appetit!
Kwaye ukuzithemba ngakumbi, jonga kwakhona ividiyo:
Okroshka kunye nenkukhu
Ukupheka izitishi zokutya ezitya
Isonka seBezdorozhevoy kwi-multivark: zokupheka kunye nezithombe
Iimfihlelo zeCleopatra kwinqanaba elitsha laseGuerlain
Iinqebengwane ngee cherry, i-nati kunye ne-pistachios
Ukupheka kwibhede lomntwana
Indlela yokumema umntu ngomhla
Isipinashi kunye nama-strawberries kunye namantongomane
Iingxowa ze-tshokoleji kunye nokuzaliswa kwe-cream
Iimpawu eziMnandi kwiLowuni yokugqibela 2017 yee-9 ne-11 zeeklasi
Indawo yokudlala: isikolo soqhagamshelwano
Isaladi efudumele kunye nenkukhu
Imibala ephathekayo entwasahlobo-ehlobo ka-2014
Isidakamizwa sase-Estrogenic djufaston